Syriana 40.000 No Namoy ny Ainy Tao Anatin’ny 20 Volana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Desambra 2012 12:50 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, বাংলা, عربي, English
Vahoaka maherin'ny 4 tapitrisa no fantatra fa hila fanampiana ao Syria amin'ny fiandohan'ny taona 2013. Izany no lohateny navoakan'ny gazetin'ny Firenena Mikambana miresaka ny momba ny maha-olona ao Syria tamin'ny 11 Novambra 2012 [pdf]. Ankizy sy tanora avokoa ny 2 tapitrisa amin'izany, izay tsy manana foto-pivelomana ary mijaly ny ratram-panahy ara-tsaina ateraky ny herisetra sy ny fifindra-toerana an-katerena. Toy izao no tatitra avy amin'ny firenena mikambana:
Miteraka fahasimban'ny maha-olona haingana ny herisetra ao Syria….. Olona 1,2 tapitrisa farafahakeliny no nafindra toerana tao amin'ny firenena. Noho ny ririnina mangatsiaka sy ny fitohizan'ny ady, mampanahy ny hoavin'ireo olona miaina ao anatin'ny ady– anisan'izany ny fiarahamonina Palestiana sy ireo mpifindra-monina.
Mitondra Fanampiana ho an'ny olona tratran'ny fahirano ao Syria. Loharano: habaka ICRC.
Nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 2012, na dia nanome rano ho an'ireo olona an-tapitrisany mahery aza ny Vokovoko Mena Iraisam-pirenena (ICRC) sy ny – Volantsinana Mena Arabo Syriana (SARC), nihamafy sy nihasarotra hatrany ny krizy momba ny maha-olona satria olona eo amin'ny 11.000 isan'andro eo foana no miala an'i Syria ary mifindra monina ao amin'ny firenena mpifanolo-bodirindrina.
Syriana 40 000 no namoy ny ainy
Antontan'isa mampalahelo no nambaran'ny Ivotoerana mpanaramaso ny Zon'olombelona ao Syria tao amin'ny tranokalany tamin'ny 22/11/2012 ka ny lohateny lehibe tamin'izany dia ny momba ireo aina nafoy marobe. Araka ny voalazan'ny ivotoerana mpanaramaso, mihoatra ny 40.000 ny isan'ny aina nafoy tao Syria.
Araka ny nambaran'ny Ivotoerana Mpanaramaso ny zon'olombelona, maherin'ny 40.129 ireo Syriana namoy ny ainy hatramin'izao, tsy lazaina intsony ireo olona an'arivony nanjavona tao anatin'ny ady, noho ny herisetra manjaka manerana an'i Syria. Toy izao manaraka izao ny antontan'isa mombamomba izany loza mahatsiravina izany:
“Farafahakeliny, olo-tsotra 28.026, miaramila mpisitaka 1.379, miaramila 10.150 ary olona 574 tsy fantatra no namoy ny ainy tao Syria tao anatin'izay 20 volana izay,”
Fampahalalam-baovao an'olo-tsotra ao Syria. Loharano: Rami Alhames Blog
Fikambanana mpiaro ny zon'olombelona marobe no nanambara fa ny fitondrana Syriana sy ireo tafiny no tompon'andraikitra lehibe amin'izao taham-pahafatesana ambony izao. Nitanisa tranga telo ny Tambajotra Aterineto momba ny Zon'olombelona, anisan'izany, ny porofo mazava fa ny tafika Syriana no tompon'andraikitra tamin'ny fahafatesana sy ny fampijaliana ireo mpikatroka. Rehefa avy nipoitra tamin'ny fahitalavi-panjakana Syriana ireo mpikatroka ary nijoro vavolombelona, naverin'ny governemanta tany amin'ireo fianakaviany sy ny namany ny vata mangatsiakan'ireo mpikatroka, nahitana ratra vokatry ny fampijaliana ny vatan'izy ireo,
Heloka amin'ny Ady ao Syria
Namoaka tatitra mitondra ny lohateny hoe “Nodoran'izy ireo Ny Foko (They Burned My Heart)” ny Ivon-toerana momba ny Zon'olombelona tamin'ny 3 Mey 2012, namariparitra ny heloka amin'ny ady tao amin'ny faritanin'i Idlib, nandritra ny fifanelanelanana momba ny drafitra ho an'ny fandriampahalemana niantsorohan'i Kofi Annan, solontenan'ny firenena mikambana:
Raha niady hevitra momba ny antsipirihan'ny drafitra ho an'ny filaminana ireo diplaomaty, nanafika ireo tanàn-dehibe tao Idlib ankisesisesy ireo fiara mifono vy sy angidimby Syriana. Tamin'ny toerana rehetra nalehanay, trano, magazay, fiara may sy simba no hitanay ary niresaka tamin'ireo olona manana havana namoy ny ainy ihany koa izahay. Voalaza fa ny tafiky ny governemanta Syriana no nanararaotra isa-minitra nandoro sy nandrava ireo tanàna alohan'ny fampiatoana ny ady.
Nizara ity lahatsary tao amin'ny Youtube ity ny Ivotoerana Mpanaramaso ny zon'olombelona, ahitana fijoroana vavolombelona tamin'ny zava-nitranga tao Idlib izany:
Filoha Assad niarahaba ny fahafatesana tonga soa tao Syria. Loharano: The Daily Dose.
Mety handresy ve ny revolisiona Syriana?
Fanontaniana napetraky ny Revolisiona sosialista izany, izay novaliana hoe:
Tsy hisy izany raha tsy manongana an'i Assad ireo mpiasa sy ny tanora ihany – tao anatin'ny folo taona, rà nandriaka sy loza mahatsiravina ho an'ny vahoaka tao Afovoany Atsinanana no nentin'ny fitsabahan'ny imperialista OTAN sy ny Rosiana.
Nandritra izany, Ammar Abdulhamid nanoratra tao amin'ny bilaoginy Syrian revolution digest:
Na manao ahoana na manao ahoana, manoloana ny isan'ireo namoy ny ainy izay mihoatra ny 40.000, sy ny isan'ireo nanjavona eo amin'ny 50.000 eo, ary ny fahasimban'ireo foto-drafitrasa maro manerana ny firenena, ratsy dia ratsy ny zava-misy.